U-Tam Đảo - Amafu Antantayo - I-Airbnb
U-Tam Đảo - Amafu Antantayo
tt. Tam Đảo, Vĩnh Phúc, i-Vietnam
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Trang & Maika
Indlu yethu izungezwe inkungu, amafu nelanga. Uma uthanda ukubuka izimo zemvelo ezishintshayo, uzothanda ukuhlala lapha. Indlu yethu iqhele ngekhilomitha elilodwa ukusuka enkabeni yedolobha iTam Dao. Ngakho-ke, kuseduze ngokwanele ukuya edolobheni kodwa futhi kukude ngokwanele ukuze ungaphazanyiswa abantu.
Indlu yethu ingangena abantu abayi-12 enamagumbi okulala ayi-4 aphindwe kabili, ama-airbed ama-2 kanye nesofa eli-1 lokho
imibhede eyidabuli engu- 4, 1 usofa, imibhede yomoya engu- 2
4.32 · 22 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Trang & Maika
Hlola ezinye izinketho ezise- tt. Tam Đảo namaphethelo